कुन प्रदेशमा कसको सरकार ? :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
नेपाली कांग्रेसको अवस्था कुन कुनमा राम्रो ?
काठमाडौं । पहिलो चरणको तुलनामा दोस्रो चरणको निर्वाचन निकै ठूलो र निर्णायक छ । एक करोड ४५ लाख कुल मतदातामध्ये पहिलो चरणमा ३२ लाख मतदाता थिए । दोस्रो चरणमा एक करोड २२ लाख ३६ हजार मतदाता छन् । पहिलो चरणको निर्वाचन ३२ हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा ३७ प्रतिनिधिसभा र ७४ प्रदेशसभा सदस्यका लागि भएको थियो । दोस्रो चरणको निर्वाचन ४५ जिल्लाका १२८ प्रतिनिधिसभा र २५६ प्रदेशसभा सदस्यका लागि हुँदैछ । दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि ७७ सय ५२ मतदानस्थल र १५ हजार ३४४ मतदान केन्द्र केन्द्र तोकिको छ ।
प्रदेश नम्बर १ का १४ जिल्लामध्ये इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी गरी सात जिल्लामा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैछ । यहाँ नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट गठबन्धनबीच नै प्रतिस्पर्धा हुनेछ । ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, खोटाङ, भोजपुर, सोलुखुम्वु र ओखलढुंगा गरी सात जिल्लामा पहिलो चरणमै निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । सोलु, पाँचथर, संखुवासभा, उदयपुर, सुनसरी, मोरङ कांग्रेसले बहुमत जुटाउने जिल्ला हुन् भने इलामको एउटा क्षेत्र जितको नजिक पुगिसकेको छ ।
प्रदेश १ मा दोस्रो चरणको मतदानका लागि ११ सय ६५ मतदानस्थल र २७ सय १८ मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । २२ लाख ७४ हजार ५९८ मतादाता निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछन् ।
प्रदेश नम्बर २ का आठवटै जिल्लाका प्रतिनिधिसभातर्फका ३२ वटै र प्रदेशसभातर्फका ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुन गइरहेको छ । प्रदेश २ का अधिकांश क्षेत्रमा संघीय समाजवादी फोरमसँग नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ भने सिरहा, महोत्तरी १, सर्लाही ३ र रौतहट ३ मा माओवादीसँग प्रतिस्पर्धा हँुदैछ । प्रतिनिधिसभाका ३२ मध्ये पाँच सिटमा राजपासँग प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । कुल २७ लाख ६७ हजार ३७५ मतदाताका लागि २१ सय ६६ मतदानस्थल र ३६ सय ७९ मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । यहाँ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संघीय फोरमसँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना छ । राजपाको स्थिति लज्जास्पद नै छ ।
प्रदेश नम्बर ३ का १३ जिल्लामध्ये सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी सात जिल्लामा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैछ । दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा र धादिङ गरी ६ जिल्लामा पहिलो चरणमै मतदान सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेश ३ को काठमाडौं, ललितपुर, सिन्धुली, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र रसुवामा नेपाली कांग्रेसको अवस्था सुदृढ रहेकाले प्रदेश सरकार कांग्रेसकै बन्ने विश्लेषण गरिएको छ । मकवानपुरमा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार डीना उपाध्यायले आफूलाई नम्बर एक सावित गर्दै लगेकी छन् । दोस्रो चरणको चुनावअन्तर्गत यस प्रदेशमा ११ सय ८० मतदानस्थल र २५ सय ३९ मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा २० लाख ७३ हजार ३४४ मतदाता छन् ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने सुनिश्चित ठानिएको प्रदेश ४ का ११ जिल्लामध्ये नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), तनहँु, कास्की, स्याङ्जा र पर्वत गरी पाँच जिल्लामा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैछ । यहाँ ६ सय ७१ मतदानस्थल र १२ सय ७४ मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । यी पाँच जिल्लामा १० लाख ६ हजार मतदाता छन् । पहिलो चरणमै मतदान सम्पन्न गोरखा, मनाङ, लमजुङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र बाग्लुङ गरी ६ जिल्लामा भएको मतलाई विश्लेषण गर्दा कांग्रेसको एकल सरकार बन्ने निश्चित छ ।
तुलनात्मक रूपमा केही कमजोर देखिएको प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, प्युठान, बाँके र बर्दिया गरी १० जिल्लामा मतदान हुँदैछ । नेपाली कांग्रेसले बल गर्दा जित्न सकिने क्षेत्रको पहिचान गरी कार्यकर्ता र साधनस्रोत परिचालन सुरु गरेकाले चामत्कारिक निर्णय आउन सक्ने बुझिएको छ । १२ जिल्लामध्ये रोल्पा र पूर्वी रुकुम गरी दुई जिल्लामा पहिलो चरणमा निर्वाचन भइसकेको छ । दोस्रो चरणका लागि यस प्रदेशमा १५ सय एक मतदानस्थल र ३१ सय ६६ मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । दोस्रो चरणअन्तर्गत यस प्रदेशमा २५ लाख ८५ हजार ३०७ जना मतदाता छन् ।
प्रदेश ६ का १० जिल्लामध्ये सल्यान, सुर्खेत र दैलेख गरी तीन जिल्लामा दोस्रो चरणको चुनाव हुँदैछ । दोस्रो चरणका लागि यो प्रदेशमा तीन सय ८५ मतदानस्थल र ६३९ मतदान केन्द्र छन् भने चार लाख ७८ हजार ७३४ जना मतदाता छन् । हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट, जाजरकोट र पश्चिम रुकुम गरी सात जिल्लामा पहिलो चरणमै मतदान सम्पन्न भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा मतदान हुने क्षेत्रमा कांग्रेस बलियो देखिए पनि पहिलो चरणको निर्वाचन भएका जिलला नै सरकार बनाउन निर्णायक देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै सरकारले निरन्तरता पाउने भएकाले प्रदेश ७ मा नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्ने निश्चितझैं देखिएको छ । देउवाकै कारण सुदूरपश्चिमको विकास र पहिचान बनेकाले कांग्रेसलाई नै मत दिने बुझिन्छ । प्रदेश ७ का नौ जिल्लामध्ये कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, अछाम र डोटी गरी पाँच जिल्लामा जिल्ला दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैछ ।
कैलालीका ४, कञ्चनपुरका २, डडेलधुरा, डोटी, बाजुरा र अछामको १ क्षेत्र कांग्रेसले जित सुनिश्चित बनाएको छ । यो प्रदेशमा दोस्रो चरणका लागि ६८४ मतदानस्थल र १३ सय २९ मतदान केन्द्र छन् भने १० लाख ५० हजार ७३२ मतदाता छन् । बझाङ, बाजुरा, दार्चुला र बैतडी गरी चार जिल्लामा पहिलो चरणमै मतदान सम्पन्न भइसकेको छ ।
Tarun Khabar0response सोमबार,१८ मंशिर २०७४ 412 Views